၂၀၁၈-ခုနှစ် မြန်မာလအလိုက် တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်းကြီး - MM Live News
September 14, 2018 MM Live News14 Comments on ၂၀၁၈-ခုနှစ် မြန်မာလအလိုက် တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်းကြီး
ပျိုရွယ်သူများ ချသ်သူအပေါ်သံသယဝင်လာမည်။အိမ်ထောင်ရှင်များသားသမီးရတနာထွန်းကားပြီး ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇော်မည်။ပညာရေးတွင်ဆရာကောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး မိမိရည်မှန်းထားသောပန်းတိုင်ကိုဆွတ်ခူးရမည်။အပေါင်းအသင်းအနှောင့်အယှက်နှင့်အပျော်အပါးလိုက်စားမှုကိုရှောင်သင့်သည်။ကျန်းမာရေးတွင် ငှက်ဖျားရောဂါ၊သွားနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါ၊အဆုတ်နှင့်ဆိုင်သောရောဂါများခံစားရ၍မကြာခဏကျန်းမာရေးညံ့မည်။ယခုနှစ်တွင်ရောဂါဖြစ်လျှင် မပေါ့ဆသင့်သောနှစ်ဖြစ်သည်။ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်အုန်းညွန့်၊ရွက်လှညွန့်၊ကြံညွန့်တို့ကိုပေါင်းပြီးကြေးပန်းအိုးဖြင့် ဘုရားတွင်ပူဇော်ပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ
ယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စများအဆင်ပြေရန်အတွက် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ(၃)ခေါက်ရွတ်ဆိုပြီးခရီးသွားခြင်း၊အပြာရောင်၊ကြက်သွေးရောင်၊အဖြူရောင်အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ➖(စ၊ဆ၊တ၊ထ)၊(၆၊၄၊၂၊၇)
ပညာရေးတွင်စနစ်တကျသင်ယူသင့်သည်။ ဉာဏ်၊ဝရီယစိုက်ထုပ်ပြီးလုပ်သင့်သည်။ကျန်းမာရေးတွင် အစားအသောက်မှားယွင်းမှုကြောင့်ရောဂါဝေဒနာဝင်တတ်သည်။နှလုံးရောဂါခံစားရတတ်သည်။ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်တန်ခိုးကြီးဘုရားတွင်ဆီးမီးသက်စေ့ကပ်ပူဇော်ပေးပါ။ဇွန်ပန်း၊သစ္စာပန်းနှင့်အဖြူရောင်ဂန္ဓမာပန်းများပူဇော်ပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ
ယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စများအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင် (ဘဂဝါ) ဂုဏ်တော်ဖြင့် (၉)ပတ်ပုတီးစိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊ဖက်ဖူးရောင်၊အညိုရောင်၊အဝါရောင် အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ➖(တ၊ထ၊က၊ခ)၊(၆၊၂၊၉၊၀)
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်အဝါရောင်ဂန္မမာပန်း၊မေမြို့ပန်း၊သစ္စပန်းတို့ကိုပေါင့းထည့်ပြီး အရှေ့အရပ်ရှိဘုရားတွင် ပူဇော်ပေးပါ။ ဇရပ်၊ကျောင်းများတွင်တံမြက်စည်း လှူပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ
ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(ဗုဒ္ဓေါဘဂဝါ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၅)ပတ်သိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊အဝါရောင်၊အနီရောင်၊ဆင်စွယ်ရောင်အဝတ်အထည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ငွေကြေးကိစ္စရပ်များချေးငှါးခြင်းသတိပြုဆောင်ရွက်ပါ။စက်ပစ္စည်းများဝင်လာမည်။အများငဘောတူညီမှုကြောင့်လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရမည်။ပျိုရွယ်သူများတစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ယုံကြည်မှုအားနည်းတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရှင်များ ရံဖန်ရံခါစကားငြင်းဆိုမှုများပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပေါ်လာမည်။ပညာရေးတွင် နှောင့်နှေးတတ်သည်။ပညာသင်စရိတ်အတွက် ခက်ခဲလာတတ်သည်။ကျန်းမာရေးတွင်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်း ၊ထုံနာကျင်နာရောဂါ၊လေနှင့်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်။ကျွမ်းကျင်သောဆရာဝန်များနှင့်ပြသ၍ကုသလျှင်ရောဂါပျောက်ကင်းတတ်သည်။
ယတြာ➖မိမိ၏မွေးနေ့တွင် ငွေရောင်ပန်းအိုးဖြင့် ရွက်လှညွန့်၊စပယ်ညွန့်၊ပိထောက်ညွန့်၊သက်ကယ်ညွန့် တို့ကိုပေါင်းပြီးပူဇော်ပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ
ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(မနုတ္တရောပုရိတ ဓမ္မာသရတိ)ဂုဏ်တော်ဖြင့် ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊ အဖြူရောင် ၊လိမ္မော်ရောင်နှင့်နို့နှစ်ရောင် အဝတ်အထည်မျာဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (ပ၊ဗ၊တ၊ဓ).(၇.၆.၄.၀)
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်ဆီမီးသက်စေ့၊ပန်းသက်စေ့၊သစ်သီးသက်စေ့လှူခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပါ။သံဃာတော်များနှင့်အဖိုးအဘွား၊အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များကို ငချိပ်ပေါင်း၊ ဘယကြော်၊ ထိုးမုန့်၊လမုန့်နှင့်အုန်းထမင်းလှူပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ
ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(ဝိဇ္ဇာစရဏ သမ္ဗန္နော)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီး ခရီးသွားခြင်း၊ ဆင်စွယ်ရောင်၊အနီရောင်၊အပြာရောင် အဝတ်ထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (ရ၊ယ၊လ၊ဝ).(၅.၉.၁.၃)
ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(အရဟံ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၉)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊ဖက်ဖူးရောင်၊ပန်းရောင်၊ကြည်ပြာရောင်အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (က၊ခ၊ဂ၊စ).(၄.၉.၆.၈)
ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(သုဂတော လောကဝိဒူ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပေးပါ၊၊
ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(သမ္မာသမ္ဗဒ္ဓေါ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၇)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊ အဖြူရောင် ၊ အဝါရောင်၊ကြက်သွေးရောင်အဝတ်ထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (က၊စ၊ည၊င).(၁.၉.၂.၄)။
ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင်၊မေမြို့ပန်း၊ ပိတောက်ညွန့်၊ ဇီးညွန့်၊ရွက်လှညွန့်၊ကန်းဇွန်းညွန့်တို့ကိုပေါင်းပြီး ကြွေပန်းအိုးဖြင့် အရှေ့အရပ်ဘုရားတွင်ပူဇော်ပေးပါ။မိမိမွေးနေ့တွင်အဝါရောင်ပန်းများ၊မုန့်ထုပ်၊ကော်ဖီမစ်ထုပ်၊ခေါက်ဆွဲထုပ်များလှူဒန်းပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ
ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(လောကဝိဒူ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၇)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊အနီရောင်၊အပြာရောင်၊ဆင်စွယ်ရောင်၊ အဖြူရောင် အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (ယ၊ရ၊တ၊ဓ).(၂.၅.၉.၃.)။
ဤနှစ်တွင်ပြည်တွင်းပြည်ပကိစ္စရေးရာအဖြာဖြာဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အခါကောင်းကျရောက်သောနှစ်ဖြစ်သည်စိတ်ကူးသစ်နှင့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အထူးခြားသောအကျိုးဆက်များဖြစ်ထွန်းလာမည်။ဖန်စီလုပ်ငန်း၊ဖက်ရှင်လုပ်ငန်း၊ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ခြင်းကောင်း၏။ယခုနှစ်တွင် ဝါဆိုလ၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ပြာသိုလများတွင် မည်သည့်ကိစ္စမဆို အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။အထူးသဖြင့်တစ်ပါးသူ၏ကြားခံဝင်ရောက်ပြောဆိုမှုများနှင့်မိသားစုတွင်ခေါင်းဆောင်လုပ်ခြင်းများ သတိထားရမည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ အိမ်ယာ၊တိုက်ခန်း၊မြေယာခြံကွက်များရရှိတတ်သည်။လူမျိူးခွဲများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်သောအလုပ်များကောင်းမည်။ မေတ္တာရေးတွင်အသေးစားပြဿနာများကို အကျယ်ချဲ့၍ပဋိပက္ခဖြစ်ကာ လမ်းခွဲရခြင်းကြုံရမည်။အိမ်ထောင်ရေးစိတ်သဘောထားကြီးကြီးထားသင့်သည်။မိမိအိမ်တွင်းရေးများနှင့်နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးသားခြင်းများအတွက်ငွေကြေးနှင့်လူမှုရေး အပူသောကများဝင်လာတတ်သည်။နယ်ဝေးဆွေမျိုးများအိမ်သို့အလည်အပတ်သွားလာခြင်း၊မသွားလိုသောခရီးများလဲသွားရတတ်သည်။
စက်မှု၊လက်မှုပညာခေတ်နှင့် ညီသောပညာရပ်များ လေ့လာလိုက်စားခြင်းများအထူးကောင်းမွန်သည်။ကျန်းမာရေးတွင်၊အဖျားအနာ၊နှလုံး၊ဆီး၊ကျောက်ကပ်၊အင်္ဂါဇတ်အစရှိသောရောဂါဝေဒနာများခံစားရတတ်သည်။ယတြာ➖မိမိမွေးနေ့တွင် မေမြို့ပန်း၊အောင်သပြေ၊ကံကော်ပန်းနှင့်သစ္စာပန်းများကိုအရှေ့အရပ်ဘုရားတွင်လှူဒန်းပေးပါ။ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(သတ္တဒေဝမနုဿာနံ)ဂုဏ်တော်ဖြင့်ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီးခရီးသွားခြင်း၊ကြေးနီရောင်၊အဝါရောင်၊အစိမ်းနုရောင်အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။စိုးမိုးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများ (သ၊ဟ၊စ၊ည).(၁.၆.၈.၃.)။
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအားလုံး စိတ်ချမ်းကိုယ်ကျန်းမာပြီး နှစ်မှာအောင်ကံကောက်းမှုများနှင့် အောင်မြင်သောနေ့ရက်များစွာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ အောက်ပါ ထိမိသော ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် /ယတြာ အစီးအမံများ အာမခံဖြင့် ပြုလုပ်ပေးနေပါသည် အိမ်ခြံမြေ၊ကား၊ အစရှိသောပစ္စည်းများ မိမိကြိုက်ဈေးဖြင့် အမြန်အရောင်းထွက်ရန် ယတြာ/ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်အိမ်မှထွက်ခွာသူ၊ ထွက်သွားသူအားပြန်လာစေရန် ယတြာ/ ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စ၊ ငွေချေးငွေငှါးသွားသူမှပြန်လည်ပေးစေရန် ယတြာ/ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် အချစ်ရေးအဆင်မပြေသူများ၊ အိမ်ထောင်ဘက်နှင့်အဆင်မပြေသူများ အတွက် ယတြာ/ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် အမှုအခင်းကိစ္စများအောင်နိုင်ရေးအတွက် အမှုရန်နိုင် ယတြာ/ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် ကျန်မားရေးမကောင်းသူများအတွက် ယတြာ/ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သော ယတြာ/ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် အနောက်အယှက် အတိုက်အခိုက်ရိနေသူများအတွက်ယတြာ/ဓာက်ရိုက်ဓာတ်ဆင် ဆရာမင်းသုခ ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာ
အတန်းပိုင်ဆရာမ၏ စောင့်ကြည့်လေ့လာချက်မှတစ်ဆင့် ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး မှသားဖွားဆရာမထံပြသကြည့်ရာ . . .
ယခုနှစ် ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲကုန်နိုင်သော တနင်္လာ ၊ အင်္ဂါ ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ စနေ သားသမီး များ….
October 17, 2018 MM Live